COD-Gudiga doorashada dadban ee Puntland oo caqabado soo wajeheen. – Radio Daljir
COD-Gudiga doorashada dadban ee Puntland oo caqabado soo wajeheen.
Noofember 21, 2016 9:58 g 0
Garoowe, Nov 22 2016-Gudiga doorashada dadban ee heer Puntland ayaa kahadlay caqabado soo waajahay gudiga, kadib dibudhac kuyimid dhammaystirka doorashada xubnaha aqalka hoose ee barlamaanka Soomaaliya.
Nabadoon Khaliif Aw-cali oo gudiga gudoomiye ah ayaa sheegay in ay maanta tababar u furayaan ergooyinka saddex beelood, kuwaas oo Arbacada dooran doona xubnaha u matali doona Aqalka hoose ee dawladda Faderaalka Soomaaliya.
DHEGEYSO-Tartan kubadda cagta ah oo ka furmay magaalada Garoowe.